अत्यधिक चिसो बढेसँगै हिमाल पारिको जिल्ला मनाङमा हिमपातले विकास निर्माणका काम ठप्प ! | सुदुरपश्चिम खबर
अत्यधिक चिसो बढेसँगै हिमाल पारिको जिल्ला मनाङमा हिमपातले विकास निर्माणका काम ठप्प !
मनाङ – हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको छ । अत्यधिक चिसो बढेसँगै जिल्लामा भएका विकास निर्माणका काम रोकिएको हो । चिसो बढेसँगै खोलाहरु जमेका छन् भने माथिल्लो भेगमा सोमबारदेखि परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर भएको छ ।
केही दिन अगाडि खोला जमेर खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका यहाँका मानिसलाई हिमपातले घरभित्रै थन्क्याएको छ । मानिस त जसोतसो घरभित्र रहे पनि पशुचौपाया हिमपातको शिकार भएका पशुपालक किसान चोल्पा गुरुङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार माथिल्लो मनाङ खांसार मनाङगाउँलगायतका ठाउँमा निर्माण भइरहेका काम रोकिएका छन् । चिसोमा सिमेन्ट ‘सेट’ नहुने र चिसोले कामदारले काम गर्न नसक्ने हुँदा सडक, खानेपानी र सिँचाइका काममा अवरोध आएको हो ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीमा सञ्चालन गरिएको स्याटेलाईट क्लिनिकमा ५० जना बिरामीले सेवा लिए !